MUQDISHO: Waa siddee RAJADA dib u doorashada MD Farmaajo.? [GUUXA DADWAYNAHA] | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii MUQDISHO: Waa siddee RAJADA dib u doorashada MD Farmaajo.?
MUQDISHO: Waa siddee RAJADA dib u doorashada MD Farmaajo.? [GUUXA DADWAYNAHA]
Qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan Muqdisho ayaa la weydiiyay su’aalo ku saabsan rajada uu ka qabo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi [Farmaajo] in mar kale dib loogu doorto xilka madaxtinimada Soomaaliya.
Su’aalahan iyo kuwa kale oo fara badan waxaa la hor dhigay ashqaas kala duwan oo aqoon iyo waaya-aragnimo la bidayo, waxaanna sidoo kale waxgaradkaasi la weydiiyay musharixiinta ugu cadcad ee u tartamaya xilkaasi halka rajadoodu ay caga-dhigi karto.
Caaqil ka mid ah odayaasha Muqdisho, diidayna in magaciisa la xuso isaga oo ammaankiisa u cabsanaya ayaa aragtidan soo bandhigay:-
“Ragga musharaxiinta ah ee xilalka soo qabtay sida Shiikh Shariif, Xassan Shiikh, C/raxmaan Cabdishakuur, Xassan Cali Khayre & ragga kale marka aan barbar dhigo Farmaajo haddii qabyaalad & qiira-jabaan meel la iska dhigo anigu waxaan qabaa, kulana talinayaa Soomaali & cid kasta ee cod leh in ay doortaan Farmaajo, 2 sabab dartood: Tan 1-aad. Farmaajo inta uu qabtay cid qabatay ma jirto, wuxuu dhisay haykal ciidan, wuxuu ku guuleystay in Soomaaliya ay soo ceshato sharafteedii dowladnimo isaga oo meel ku soo xiray dalalkii faragelinta ku hayay Soomaaliya, wuxuu soo nooleeyey kaabayaal dhaqaale. Tan kale ee ugu muhiimsan waxay tahay wuxuu ku guuleystay in saddex maamul goboleed uu kasbado, labadii kale ee Soomaali cunaha ku dhaganeyd-na geed ku soo xero, wuxuu hadda qarka u saarnaa in labadooda ba uu ka taqaluso, waxaan aaminsanahay haddii 4 sanno kale loogu daro inuu Soomaali middeyn lahaa xittaa Somaliland inuu soo xera-gelin lahaa. Haddii xilkaasi ragga musharixiinta ah midkood ku guuleystaan waxaan hubaa in qolyaha ugu horreeya ee qaawin doona in ay noqonayaan Puntland & Jubbaland taas iga qor, haddase waa xaraarug hadduu Farmaajo soo laabto waa ku daayeen. Sidaas oo ay tahay na Farmaajo 2 cilad ayaan u hayaa oo dowladnimada Soomaaliya caay & ceeb ku ah, kuwaas oo kala ah:- Wuxuu dadka ka xushaa nin ba ninka uu ka liito, isaga oo ay ujeedadiisu tahay in qofka uu xilka u dhiibayo noqdo qof isagu uu leeyahay. Tusaale: isaga oo heli kara boqolaal kun oo Mudulood ah, kana aqoon & waaya-aragnimo badan Cumar Filish, ayaa wuxuu u doortay Cumar Filish si uu ugu isticmaalo Mudulood-ka kale, u fiirso dadka uu Mudulood ka doortay Cumar Filish, Salaad Cali Jeelle, Xassan Xundubeey, Muxudiin Afrax. Dad badan oo uu xilal muhiim ah u dhiibay wuxuu ku xushay liidasho iyo in ay sax & qalad ba madaxa u ruxayaan waana wax ku ceeb ah dowladnimada. Cilada 2-aad ee aan Farmaajo u hayo waxay tahay wuxuu col-lastay, lana dagaalay cid kasta ee ka fikir duwan. In aad magacii dowladnimada aad dadka ugu dhibaateyso wuu iga aragti duwan yahay aakhirka waxay kuu horseedeysaa inaad meel xun ku baxdo adigana”
Aragti taas ka duwan waxaa qaba Ilyaas Xuseen Xaashi oo ka mid ah odayaasha degmada Waaberi, waxaanna uu Ilyaas tilmaamay haddii Farmaajo xukunka ku soo laabto in dadka uu ka dhigi doono wax u sacbiya & wax uu duleysto, isaga oo Soomaali ugu baaqay in ay iska diidaan hab-dhaqanka keli-talisnimada ee Farmaajo.
“Arag, inta jowrfal ee uu sameeyey 4-tii sanno ee uu xilka hayay, dadkii uu weeraray, kuwii uu dilay & isaga oo dowladnimadii u isticmaalay cid kasta ee iga fikir duwana waa dilayaa, qofka sidaas ah marka uu xukunka ku soo xiddideysto siddeey xaaladiisu noqon kartaa.? Ayuu is-weydiiyey Ilyaas, isaga oo intaasina sii raaciyay:
“Aniga ilaa hadda waxaan liqi la’ahay waxa Xassan Cali Khayre aamusiyay.? Khayre, waa ninka keliya ee ka taqalusi kara Farmaajo muxuu la aamusan yahay.? Wuxuu ogyahay wax walba oo uu Farmaajo qaribay, marka aan aamusnaantiisa arko waxaa ii soo baxaysa tuhunkii laga qabay Khayre ee ahaa in isaga & Farmaajo is ogyihiin, uuna Farmaajo u shaqeynayo ama la isku afgartay haddaad na qarxiso annaga na siro badan baan ka haynaa oo aan bannaanka soo dhigaynaa. Khayre nin karmeed waa yahay laakiin wuxuu u egyahay nin wax doonaya, haddana aan ku dhicis lahayn oo gadaal ka cabsanaya”
LA SOCO QEYBO KALE OO XIISO LEH.
ARAGTIDAADA KU SOO HAGAAJI E-MAIL: Shirwaccabduqaadirshirwac@gmail.com
AFEEF: Qoraalkani ma aha mid ka tarjumeysa hadafka shabakada, wuxuu mid ku kooban qoraha
Previous articleRa iisal wasare Maxamed Xuseen Rooble oo maanta soo dhaweyn ku leh degmada Dayniile
Next articleSacuudiga oo sharci cusub soo saaray
Isbuurashada Israa’iil Kullan Diini ah oo ay ku dhinteen ugu...
Adeegga gurmadka degdegga ah ee Israa'iil ee Magen David Adom (MDA) ayaa xaqiijiyay dhimashada inkastoo aanay sheegin tirada saxda ah ee dadka geeriyooday, haseyeeshee...